Ukuqhamuka kwesibili okulandelanayo kwenzeka emakhorali | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuphuma kwamakhorali kwesibili ngokulandelana
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iba yinhlekelele ezinkulungwaneni zezinhlobo zezilwane nezitshalo emhlabeni wonke. Kulokhu, sibuyela enyakatho-mpumalanga ye-Australia ukubona iGreat Barrier Reef ehluphekayo omunye umcako omhlophe unyaka wesibili ngokulandelana.
Uma lokhu kuqhubeka, kuzokwenzekani ngezixhobo zamakhorali?
1 IGreat Barrier Reef
2 Ukufa kwamakhorali
IGreat Barrier Reef
IGreat Barrier Reef iyi-ecosystem engamakhilomitha angama-2.300 ubude emenyezelwe njengeNESCO ngamaGugu Omhlaba Ukwehla kwegazi kubangelwa ukwanda kwamazinga okushisa emanzini olwandle ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu.
Kusesekuseni kakhulu ukwazi ukuthi imiphumela yayo emibi ingafaniswa ne-bleaching yanyakenye, ethathwa njengeyimbi kakhulu emlandweni eGreat Barrier Reef, lapho kwenzeka khona amacala afanayo ngo-1998 nango-2002.
Akusabalulekile ukuthi ngabe lo mcimbi mubi noma mubi ukwedlula owedlule, kubaluleke kuphela ukuthi isimo sezulu emhlabeni siguquke futhi silethe izehlakalo ezimbi kakhulu eGreat Barrier Reef.
Ukuguquka kwesimo sezulu ngonyaka odlule kuqothule ama-coral angama-22% kuso sonke isimo semvelo esingamakhilomitha angu-2.300. Amakhorali anobudlelwano obukhethekile bokulingana nama-algae amancane abizwa nge-zooxanthallae, ahlinzeka abaphathi bawo nge-oxygen nengxenye yamakhemikhali e-organic abakhiqiza nge-photosynthesis.
Ngokushintsha kwesimo sezulu nokwanda kwamazinga okushisa, lokhu kubhekene nengcindezi yezemvelo, ngakho-ke amakhorali amaningi axosha i-zooxanthallae yawo ngobuningi, kanti ama-coral polyps asala engenamabala. Njengoba zingenayo i-pigmentation, zibonakala zicishe zisobala emathanjeni esilwane.
Njalo ngonyaka kufa izinkulungwane zamakhorali ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu futhi ngezinga esiqhubeka ngalo ukungcolisa, amazinga okushisa olwandle nolwandle ngeke ayeke ukukhuphuka.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuphuma kwamakhorali kwesibili ngokulandelana
Ukufudumala kwezilwandle sekuvele kungu-13% ngaphezulu kunalokho obekulindelekile